Kimberly Process Yotadza Kuwirirana paMangoda ekwaMarange
Mbudzi 02, 2010
Kwakaita kusawririna kumusangano we Kimberly Process uri kuitirwa muJerusalem ku Israel pamusoro penyaya yemangoda ekwa Marange, nyika dzemu Africa dzichiti Zimbabwe ngaipihwe mvumo yekutengesa mangoda ayo, asi dzekumavirira dzichiti Zimbabwe ngaitange yagadzirisa zvese zvinodiwa ne Kimberly Process.
Nekudaro, musangano wakaitwa nezuro madeko wakazomiswa mushure mekunge gurukota rezvemigodhi, VaObert Mpofu, vati Zimbabwe yakaphiwa gwaro reKP nguva yapera, nokudaro inoda kutanga yaverenga zviri mugwaro iri. VaMpofu vanonzi vakatiwo Zimbabwe yainge yaita zvese zvinodiwa neKimberly Process saka inofanira kubvumidzwa kutengesa mangoda ayo.
Musangano uyu wakabvumirana kuenderera mberi nenyaya iyi neChipiri, asi izvi zvikazoshandurwa zvichinzi nyaya yeZimbabwe ichapinda mudariro neChitatu. Muswere wese neChipiri, musangano uyu waita hurukuro dzimwe dzeKP dzisinei neZimbabwe.
KP inonzi iri panguva yakaomarara kuti yofadza sei vanoona nezvekodzero dzevanu vari kuti Zimbabwe isapihwa mvumo, uyewo iyo Zimbabwe yacho iri kuti yaedza kutevedzera zvizhinji zvinodiwa.
Kunyange hazvo paine kupesana panyaya yeZimbabwe muKP, VaMpofu vanoti Zimbabwe ichaenderera mberi nekutengesa mangoda ayo isina kupihwa mvumo neKP.
Vanoona nezvemabasa emasangano akazvimirira anodyidzana neKP, Va Shamiso Mutisi, vanoti pachine mutambo mukuru kuti KP ibude nechisungo panyaya yeZimbabwe.
KP inofanirwa kuwirirana yose kuti yopa Zimbabwe here mvumo yekutengesa mangoda, kana kuti yoinyima.